कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने २० सूत्र – ताजा समाचार
मान्छेका असंख्य चाहनाहरु मध्यै सबै भन्दा पहिलो चाहना हो, जवान देखिनु । चटक्क मिलेको ज्यान र जवान देखिने अवस्था कसलाई राम्रो नलाग्ला र ? जवान देखिनु भनेको सुन्दर देखिनु मात्रै पनि होइन । जवान देखिनुको अर्थ स्वस्थ हुनु र देखिनु हो, अनि तेजिलो र ओजपुर्ण देखिनु पनि हो ।
संसारभरका मानिसहरु जवान देखिनका लागि आफुले सक्दो काम गरिरहेका हुन्छन् । जवान देखिनका लागि एकाबिहानैदेखि उठेर योग गर्ने वा कसरत गर्नेहरु पनि असाध्यै धेरै हुन्छन् भने खानपिनमा सन्तुलन कायम राखेर जवान देखिन खोज्नेहरु पनि उत्तिनै छन् । यसो त जवान देखिन कै लागि पैसा र समय खर्च गर्नहरुको पनि कमि छैन संसारमा ।
तर उमेरसँग र प्रकृतिसँग कसैको केहि लाग्दैन । सँधै जवान भइरहन त सम्भव त छैन तर आफ्नो भएको उमेर भन्दा कम देखिन भने सम्भव छ ।
यहाँ हामीले त्यस्तै केहि विश्वव्यापी उपायहरु संग्रह गरेका छौँ जसले तपाईले भएको उमेर भन्दा जवान देखिन मद्दत गर्छ । महिला तथा पुरुष दुवैका लागि उपायहरु एकै ठाउँ संग्रह गरिएकाले कुन तपाईका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने आफैले निक्यौल गर्नु होला ।
जवान देखिने विश्वव्यापी सुत्रहरु
२०. जवान हुनु भौतिक कुरा मात्रै होइन, सोचाइको कुरा पनि हो । तपाईंले आफूलाई जवान महसुस गर्नुभयो भने अरूले पनि तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छन् । तपाईंलाई जवान देखिनका लागि सर्जरीकै आवश्यकता छ भन्ने होइन । सर्जरी गरिसकेपछि पनि तपाईंको विचार पुरानै रह्यो भने तपाईं जवान रहनुहुन्न ।
हामीले यो लेख नयाँ पत्रिकाको लेखमा आधारित भएर तयार पारेका हौँ । तपाइलाई यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने कृपया सेयर गर्न नभुल्नु होला । जानकारी बाढ्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो ।